Kubaluleke Kangakanani Ubungakanani Ubunzima be-Shaft kwiiKlabhu zeGalfu?
I-Golf Shaft Isisindo: Kubaluleke Kangakanani KwiiKlasi ZamaGolfu?
Ukutshintsha okukhulu kwiisisindo zegrafu zegolfu ziza ngexesha lonke. Izitya ze-Steel zithela ngaphezu kwee-graphite shafts, kodwa ngaphakathi kweentlobo zombini abakhiqizi babonakala beqhubeka beza kunye nokukhetha okulula. Ukususela kumzimba ongenamandla ukuya kwi-ultra-lightweight kuya ... i-ultra-ultra? Musa ukubheja kulo.
Kodwa kubaluleke kangakanani ukubaluleka kweengqungquthela kwiiklabhu zakho zegalufu ? Ingaba ibalulekile kumntu othile wegolide?
Ubunzima bebhola ngokubanzi kubaluleke kakhulu, kwaye oko kwenza ukuba isisindo se-shaft sibaluleke kuba iirhafti ziphi na ukuhluka kwezona zinto zifunyenwe.
Uninzi olungakumbi kwi-Shaft Weight ngaphezu kweClubhead ne-Grip Weights
"Nangona i- clubhead isisindo kunye nesisindo somzimba singakwazi ukuhluka ngokuxhomekeka kwimfuno ye-golfer ye- swingweight ephezulu (ubukhulu be-headweight) okanye ubukhulu obukhulu bokubamba ubukhulu (ubunzima bokubamba), akukho ntloko okanye intloko ikhona malunga nobubanzi bezilingo njengoko kwi-shaft, "kutsho uTom Wishon, umqambi wegalufa wegalufa kunye nomsunguli weThrownon Golf Golf.
Ngoko xa umvelisi wegalufu efuna ukunciphisa ubunzima kwi- club ye-OEM yomnikelo, loo nkampani inokuqala ukujonga kwizinto ezikhethiweyo. Ngenxa yeendidi kwiimarike ze-shaft, yilapho ukugcinwa kwamanani amaninzi kunokufumaneka khona.
Ukunyusa ubuninzi bee-Shafts Golf
Ngelo xesha sathetha kwi-Wishon, wasitshela ukuba "iinqwelo zithengwa zilinganise ubuninzi be-130 gram (4.6 i-ounces) okanye ukukhanya njenge-40 grams (1.4 i-ounces).
Ngaloo ndlela, xa i-golfer ishintshela kwi- shaft ye-shaft yesilinganiso kwi-graphite shaft namhlanje, ukuhla kwexabiso elipheleleyo liya kuba kwindawo engama-50 amagremu okanye ngaphezulu (1.75 i-ounces). "
Ukususela ngoko, i-shafti shafts kwi-30s yegramu zifikile. Ngoko ke ukutshintshwa kwi-graphite engxinanxanxu ukuya kwisiqhawulo kunokuvelisa okwenene, amanqaku amaninzi ngokulinganisa kweqela lebhola.
Yiyiphi iNgongoma yokwakha iClubs Golf Lighter?
Abadlali begrafti zokuzonwabisa bayakuthanda ukubetha ibhola kude, nangona asikwazi ukuba yiyiphi i-ball direction! Ukulibetha phambili kuthetha ukutshintsha ngokukhawuleza. Ukuthengiswa kweeklasi zegalufa zizonke malunga nokuthengisa ngokukhawuleza kwintambo ye-clubhead, ngoko ke, umgama omde.
"Ijubane lokuzula liyona nto echaphazelekayo echaphazela ukudubula kude," u-Wishon wachaza. "I-lighter isisindo esipheleleyo seqela legalufa, ephakamileyo i-swing ijubane i-golfer kufuneka ikwazi ukuvelisa neqela."
Khawukhumbule nje: Ijubane lokujikeleza alikho kwi-vacuum. Ingxenye enye ye-puzzle. Ukuba unciphisa ubunzima bakho bebhola yegalufu, unako ukuguqula ngokukhawuleza, kodwa unokuthi ulahle ezinye izinto.
Njengoba i-Wishon ichaza, "I-swingweight yebhula kufuneka ifaneleke ngokufanelekileyo kumandla kunye ne tempo ye-golfer okanye nokuba nayiphi na indlela eyanciphayo ebonakalayo kwisisindo esipheleleyo seeklabhu ziza kubangela ipesenti ephezulu ye-hits, apho iya kunciphisa umgama. "
Ngoko, ewe, ubunzima be-golf shaft kubalulekile kukuba yinto eyona nto ebalulekileyo kwimibono yobunzima beqela. Kodwa ukuba uhamba ukukhanya ukugxotha umgama omde, khumbula nje ukuba uqwalasele i-swingweight, nayo.
(Yiyiphi, ukuba awuyena umgca wegolati, mhlawumbi uthetha uhambo oluya kwi-clubfitter luncedo xa ukhetha i-shafts ezintsha okanye iiklabhu.)
Buyela kwizahlulo zeGolfu Inkcazo ye- FAQ
Ukuxazulula iingxaki ze-Bike Handlebar ne-Stem Stable
Izinto Ezinhlanu Akufanele Uyenze Ngethuba Xa Unogada
Uluhlu Lwetafile - Uyazi Ukwahlukana Nendawo YesiXhosa?
Iingcebiso zokufunda iZibhalo zeSih
Yenza Fireballs Unako Ukubamba Ngesandla Sakho